Wasaaradda Warfaafinta Puntland oo qaaddacday shir ku soo xirmay Muqdisho – Puntland Post
Posted on April 23, 2018 April 24, 2018 by CCC
Wasaaradda Warfaafinta Isgaarsiinta Hiddaha iyo Dhaqanka dowladda Puntland ayaa gebi ahaanba qaaddacday, qodobadii ka soo baxay Shirkii Bed-qabka Suxufiyiinta ee maalmo ka hor ku soo xirmay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Qodobka ugu weyn ee shirkaasi ka soo baxay ayaa lagu sheegay samaynta guddi Qaran oo qaabilsan bed-qabka Suxufiyiinta Soomaaliyeed,kaasoo ka kooban 11 xubnood oo ka kala imaanaya dowladda Federaalka,Warbaahinta dalka iyo bulshada rayidka ah. Haye yeeshee Wasaaradda Warfaafinta Puntland ayaa shirkaasi ku tilmaantay”mid ku kooban gobolka Banaadir iyo Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya oo keliyah”.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Isgaarsiinta Hiddaha iyo Dhaqanka dowladda Puntland,Cabdi Xirsi Cali(Qarjab) oo caawo wareysi gaar ah siiyay PuntlandTV,ayaa sheegay in shirka iyo qodobada ka soo baxay midna aan wax door ah laga siin dowladaha xubnaha ka ah Federaalka oo ay Puntland ku jirto,sidaasi darteedna aysan khusayn go’aannada laga soo saaray.
Shirkadaha Golis iyo Eneeye oo ku dagaallamay Boosaaso
Weerar ka dhacay Hotel ku yaalla Nairobi oo ku sugnaa Madaxweynaha Galmudug
Goorma Deni la caleema-saari doonaa?
Madaxweyne Farmaajo oo soo xiray kalfadhigii 4-aad ee Baarlamaanka
New Puntland President meets with cabinet ministers
Said Abdullahi Deni elected President of Puntland state of Somalia